Myanmar Embassy in Brunei Darussalam hosted an Independence Day Reception – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Myanmar Embassy in Brunei Darussalam hosted an Independence Day Reception
The Embassy of the Republic of the Union of Myanmar in Brunei Darussalam hosted an Independence Day reception to celebrate the 70th anniversary of the Independence Day of Myanmar at the Indera Samudra Grand Hall of The Empire Hotel & Country Club, Jerudong on 11th January 2018.
Present as the guest of honour and representing the Government of His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam was Dato Seri Setia Awang Haji Bahrin bin Abdullah, Minister of the Ministry of Development along with his spouse, Pengiran Datin Hajah Norsiah binti Pengiran Haji Hamdan. Members of the foreign Diplomatic Corps, Commander in Chief of Royal Brunei Armed Forces, Senior Officials of the Ministries of the Government of Brunei Darussalam, Representatives from private organizations and Myanmar citizens who were dwelling in Brunei Darussalam also attended at the reception.
They were received by the Ambassador of Myanmar to Brunei Darussalam, H.E. U Cho Htun Aung and Madam Daw Nang Yin May Win. The event commenced by playing National Anthems of Brunei Darussalam and the Republic of the Union of Myanmar respectively.
Then, the occasion continued withawelcoming speech by H.E. U Cho Htun Aung in which he highlighted the strong diplomatic ties between Brunei and Myanmar and cooperation for 25 years in various fields including energy and agriculture, followed byaceremonial cake-cutting and taking group photo by the guest of honour, H.E. U Cho Htun Aung and Madam and other ASEAN Heads of Missions.
H.E. U Cho Htun Aung and Madam Daw Nang Yin May Win presentedatoken of appreciation to the Guest of Honour, Dato Seri Setia Awang Haji Bahrin bin Abdullah and his spouse Pengiran Datin Hajah Norsiah binti Pengiran Haji Hamdan separately.
The honorable guests were entertained with Myanmar Traditional Dance Performances and by playing Myanmar Traditional Harp by artistes from Ministry of Religious Affairs and Culture of Myanmar and they also enjoyed Myanmar delicacies.
မြန်မာသံရုံး၊ ဘန်ဒါဆရီဘီဂါဝန်မြို့မှ (၇၀)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ
ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်
(၇၀)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနားကို (၁၁-၁-၂၀၁၈)ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့ (၁၉၃၀)နာရီတွင် ဘန်ဒါဆရီဘီဂါဝန်မြို့ရှိ The Empire Hotel & Country Club တွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါလွတ်လပ်ရေးနေ့ ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနားသို့ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံအစိုးရ၏ ကိုယ်စားလှယ် ဂုဏ်ထူးဆောင် ဧည့်သည်တော်အဖြစ် Honourable Guest of Honour Dato Seri Setia Awang Haji Bahrin bin Abdullah ဝန်ကြီး အပါအဝင် ဒုတိယဝန်ကြီး Yang Mulia Dato Paduka Haji Suhaimi bin Haji Gapar၊ ဘရူနိုင်းတော်ဝင်တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၊ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံရှိ သံတမန်အသိုင်းအဝိုင်းမှ သံအမတ်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာမိတ်ဆွေများ အပါအဝင် ကဏ္ဍအသီးသီးမှ ဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အခမ်းအနားအစီအစဉ်အရ နှစ်(၇၀)မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကို ဘရူနိုင်းဒါရူဆလမ် နိုင်ငံတော်သီချင်းနှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သီချင်းတို့အား အလှည့်ကျအလေးပြု ခြင်းဖြင့် အခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် သံအမတ်ကြီး ဦးချိုထွန်းအောင်က မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဘရူနိုင်းနိုင်ငံတို့အကြား နှစ်ပေါင်း(၂၅) နှစ်တာကာလအတွင်း စွမ်းအင်နှင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ အပါအဝင် အခြားကဏ္ဍအသီးသီး တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် နှစ်နိုင်ငံသံတမန်ဆက်ဆံရေးတို့ကို အလေးပေးထည့်သွင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ယင်းနောက် မြန်မာသံအမတ်ကြီးနှင့်ဇနီးတို့က (၇၀)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ကိတ်မုန့်အား လှီးဖြတ်၍ ဘရူနိုင်းဒါရူဆလမ်နိုင်ငံအစိုးရ၏ ကိုယ်စားလှယ် ဂုဏ်ထူးဆောင် ဧည့်သည်တော် ဝန်ကြီးနှင့် ဇနီး၊ အာဆီယံနိုင်ငံများမှ သံအမတ်ကြီးများ/ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံများနှင့်အတူ အမှတ်တရစုပေါင်း ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး မြန်မာသံအမတ်ကြီးက ဘရူနိုင်းနိုင်ငံအစိုးရ၏ ကိုယ်စားလှယ် ဂုဏ်ထူးဆောင် ဧည့်သည်တော် ဝန်ကြီးအား ကျောက်စိမ်းရေနွေးခရား တစ်စုံ အမှတ်တရ လက်ဆောင် ပေးအပ်ခဲ့ပြီး၊ သံအမတ်ကြီး၏ ဇနီးမှလည်း ဂုဏ်ထူးဆောင်ဧည့်သည်တော်ဝန်ကြီး၏ဇနီးအား ဂုဏ်ပြုကျောက်စီပန်းချီကားချပ်တစ်ချပ်ကို လက်ဆောင်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဘရူနိုင်းနိုင်ငံတို့၏ သံတမန်ဆက်ဆံရေး (၂၅)နှစ် ပြည့်မြောက်သည့်နှစ် ဖြစ်သည့်အလျောက် မြန်မာနိုင်ငံ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနမှ အနုပညာရှင် (၃)ဦးတို့မှ စောင်းတီးခတ်မှု၊ ရုပ်သေးအက၊ နှစ်ပါးသွားအက စသည့် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများအပြင် မြန်မာ့ရိုးရာအစားအသောက်များဖြစ်သည့် မုန့်ဟင်းခါး၊ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ၊ မြန်မာ့ မုန့်ပဲသရေစာများဖြင့် ထည့်သွင်းဧည့်ခံခဲ့ကြပါသည်။